Fanaanka Mahad Indhodeero oo hees Duco iyo Tageero ah u Qaaday Maamulka Khaatumo -
Sannad guuradii Shanaad ee gobolka Khaatumo ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Xafladan loogu dabaal degayey maamul goboleedka iyo waliba sannad guuradii shanaad ee ka soo wareegtay aasaaska gobolka Khaatumo ayaa waxaa ka soo qaybgaleen dadweyne aad u farabadan, fanaaniin iyo waliba madax ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshadda.
Xafladan loogu dabaal degay sannad guurada 5-aad ee Khaatumo ayaa waxay ahay mid si wanaagsan loo soo agaasimay. Goobtii ay xafladu ka dhacday ee xarunta shirarka ee Safari ayaa waxaa laga soo jeediyay qudbado qiimo badan. Sidoo kale fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota iyo waliba kuwo kale oo ka yimid dalka Mareykanka dibadiisa ayaa iyaguna goobta ka qaaday heeso ay aad iyo aad ugu riyaaqeen dad weynihii soo buux dhaafiyey ama nasiibka u yeeshay in ay ka qayb galaan xaflada sannad guurada 5-aad ee gobolka Khaatumo.
Haddaba halkan ka daawo qaar kamid ah sawiraddii iyo hees kamid ah heesii laga qaaday xaflada oo uu ku heesayo fanaanka weyn ee Mahad Indho-deero.
Xigashadda sawirrada: Yasin Ducaale
Related Items:Featured, Somali community
Araweelo ” When Shit Becomes Too Difficult in My Life, I Find Her in Me.”